Semalt သည်စျေးကွက်ပြက္ခဒိန်၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်၎င်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်မည်သို့ရှိသနည်း
၂ ။ Marketing ပြက္ခဒိန်ဆိုတာဘာလဲ။
၃ ။ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြက္ခဒိန်တွင်သင်လိုအပ်သည့်အရာ
၁ သင်၏လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ)
၂ ။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ tab
၃ ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြက္ခဒိန်များအတွက်နည်းပညာ -based Tools များ
IV ။ လုပ်ငန်းများအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်သောအချိန် - Frame
၄ ။ Marketing ပြက္ခဒိန်အသုံးပြုခြင်းရဲ့အားသာချက်များ
၁ အချိန် - ထိရောက်မှု
၂ ။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်
၃ ။ မြှင့်တင်ရေးအခွင့်အလမ်းများ
IV ။ ဖောက်သည်များ/ဖောက်သည်များနှင့်အတူပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှု
V. Track ပြီးတော့စောင့်ကြည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတိုးတက်မှု
၅ ။ သင်၏ 2021 စျေးကွက်ပြက္ခဒိန်တွင်စတင်ခြင်း
၂ ။ တသမတ်တည်းပြက္ခဒိန် Layout နှင့်ပုံစံ
၃ ။ စနစ်တကျပြက္ခဒိန်၏အရေးပါမှု
IV ။ ပြက္ခဒိန်ဒီဇိုင်း
၆ ။ နိဂုံး
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်သင်၏စီးပွားရေးတွင်ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်ရန်မဟာဗျူဟာမြောက်အလှည့်အပြောင်းကိုသင်လုပ်ရပေလိမ့်မည်။ သင့်မှာအစကတည်းကရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အစီအစဉ်ရှိရင်၊ နှစ်သစ်မှာလာမယ့်အနာဂတ်မှာရှင်သန်ကြီးထွားဖို့အတွက်သင်ပိုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြက္ခဒိန်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဖြစ်ရပ်များကိုခြေရာခံရန်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုစီစဉ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ ဒီလိုနည်းနဲ့မင်းရဲ့ဂိမ်းမှာဆက်နေနိုင်မှာပါ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြက္ခဒိန်သည်သင့်အားကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ထားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုလိုက်နာရန်လည်းကူညီလိမ့်မည်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့်လူအများအသိအမှတ်ပြုပြီးယုံကြည်ရသောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၀ င်ငွေများစွာရရှိသောအမှတ်တံဆိပ်ကိုသင်တည်ဆောက်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်တည်နေရာပြက္ခဒိန်တစ်ခုသည်သင့်အားပစ်မှတ်ထားနေစေရန်ကူညီနိုင်သည်။ သင်သည် client အသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ၊ လာမည့်စာမျက်နှာတွင်သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုရှာဖွေသည်ဖြစ်စေသင်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအဖြစ်အပျက်များကိုလျင်မြန်စွာခွဲခြားသိမြင်နိုင်လိမ့်မည်။ သင်၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများအပေါ်လည်းနောက်ဆုံးသတင်းများကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
ဒီဂျစ်တယ်ပြက္ခဒိန်သည်သင်၏ဘဝကိုရိုးရှင်းစေသည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးကိုစက္ကူသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာစီစဉ်ပြီးဖြစ်ရပ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံရန်၎င်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သတ်မှတ်ရက်များသို့မဟုတ်အခြားအရေးကြီးသောမှတ်တိုင်များကိုလက်လွတ်မည်မဟုတ်ချေ။ ဤစာမူ၌သင်၏စီးပွားရေးပန်းတိုင်များသို့ရောက်ရှိရန်သင်၏ ၂၀၂၁ အရောင်းအဝယ်ပြက္ခဒိန်၌သင်လိုအပ်သမျှကိုလေ့လာလိမ့်မည်။
သင်သို့မဟုတ်သင်၏ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၄ င်း၏သတင်းစကားကိုမည်သို့ဆက်သွယ်မည်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလူ ဦး ရေစာရင်းသို့မည်သို့မြှင့်တင်မည်ကိုလည်း၎င်းကဖော်ပြသည်။ အများအားဖြင့်၊ ၎င်းသည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏စျေးကွက်မဟာဗျူဟာနှင့်ရည်မှန်းချက်များနှင့်ဆက်နွှယ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်သင်၏စျေးကွက်ရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်ခြင်းသည်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းသာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရှေ့လမ်းကိုကြိုတင်စီစဉ်ခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အဖြစ်အပျက်အားလုံးကိုအချိန်ဇယားအတိုင်းထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်သင်၏စီးပွားရေးကိုတောင်မှတကယ်အောင်မြင်လိုပါကအောက်ပါမေးခွန်းများကိုသင့်ကိုယ်သင်မေးပါ။ သင်၏ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းကိုတိုးချဲ့ရန်နှင့်သင်၏ဘဏ္meetာရေးရည်မှန်းချက်များပြည့်မီရန်အဘယ်ဖြစ်ရပ်များကိုသင်ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။ အဘယ်စည်းဝေးကြီးများနှင့်ကုန်စည်ပြပွဲများကိုသင်တက်ရောက်နိုင်သနည်း။ မည်သည့်လူထုလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပွဲတော်များကိုသင်မြှင့်တင်နိုင်သနည်း။
ဤမေးခွန်းများ၏အဖြေများသည်နောင်လာမည့်နှစ်တွင်သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးကမင်းရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြက္ခဒိန်ကိုသူတို့ရောက်လိမ့်မယ်လို့သင်သိထားသင့်တယ်။ ဤပြက္ခဒိန်သည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာများဖွံ့ဖြိုးပြီးအကောင်အထည်ဖော်ရန်သင်၏တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ဤတွင်သင်၏ 2021 စျေးကွက်ပြက္ခဒိန်တွင်ဖြစ်သင့်သောအရာကိုပါပဲ။
I. သင်၏လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ)
သင်၏ပြက္ခဒိန်တွင်သင်လိုအပ်သည့်အရာတစ်ခုမှာသင်၏အလုပ်အတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအလုပ်သည်ပထမ ဦး ဆုံးစာရင်းပြုသင့်သည်။ ၎င်းသည်တိုတောင်းသင့်သော်လည်းသင်နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မည့်အလုပ်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြသင့်သည်။ ဤတာ ၀ န်များကိုသင်ပုံမှန်လိုက်နာရန်လိုအပ်သည့်သင်၏စျေးကွက်မဟာဗျူဟာနှင့်သက်ဆိုင်သောအလုပ်များအဖြစ်စာရင်းပြုသင့်သည်။
အလုပ်ရှုပ်နေသောပြက္ခဒိန်သည်ရှုပ်ထွေးပါကမည်သို့အသုံးပြုမည်နည်း။ ထို့ကြောင့်သင်၏ ၂၀၂၁ စျေးကွက်ပြက္ခဒိန်တွင်သင်၏ပြက္ခဒိန်ကိုအထောက်အကူပြုမည့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ tab တစ်ခုပါဝင်သင့်သည်။ သင်သည်ကွဲပြားသောဖောက်သည်များ၊ ဌာနများနှင့်အဖွဲ့များနှင့်အလုပ်လုပ်ပါကသင်၏ပြက္ခဒိန်သည်လွယ်ကူသောဆက်သွယ်ရေးနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်အတွက်၎င်းတို့အတွက်တစ်ခုစီအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအမှတ်အသားပြုထားသင့်သည့်အမှတ်အသားများထားသင့်သည်။
သင်၏ e-ပြက္ခဒိန်တွင်သင်လိုအပ်သည့်အရာသည်နည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံသောကိရိယာများဖြစ်ပြီးသင်၏ပြက္ခဒိန်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်၊ အသေးစိတ်ကျအောင်နှင့်စနစ်တကျစီစဉ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သင်သုံးနိုင်သောကိရိယာအချို့သည်လွယ်ကူစွာကိုးကားနိုင်ရန်စာရင်းပြုစုထားသောအလုပ်စာရင်းပါသော PPTs၊ စာစောင်များနှင့်စက္ကူစာရွက်များဖြစ်သည်။ နည်းပညာကိုအခြေခံပြီးမင်းရဲ့ပြက္ခဒိန်လေလေ၊ သင်၏လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်ပိုမိုထိရောက်လေလေဖြစ်သည်။
IV ။ လုပ်ငန်းခွင်များအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်သောအချိန်ဘောင်
ကွဲပြားခြားနားသောအဖြစ်အပျက်များ၏အချိန်အပြင်သင်ရေးဆွဲထားသောအလုပ်များနှင့်တာဝန်များအတွက်အချိန်ကာလမပါရှိပါကသင်၏ 2021 အတွက်သင်၏စျေးကွက်ပြက္ခဒိန်သည်၎င်းသည်မဟုတ်ပါ။ အရာရာတိုင်းအတွက်အချိန်ကုန်ခြင်းကသင့်အားအကျိုးရှိစွာနေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင်ယနေ့ရရှိနိုင်ဆုံးသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုမှာသင်၏ပြက္ခဒိန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုထိရောက်စွာကြော်ငြာနိုင်သည့်အတွက်၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ထိရောက်သောပြက္ခဒိန်တစ်ခုကိုသင်မစတင်သေးပါကသင့်လုပ်ငန်းအတွက်အခွင့်အရေးများစွာပျောက်ဆုံးနေသည်။ ယခုသင့်စီးပွားရေးအတွက်ထိရောက်သောပြက္ခဒိန်တစ်ခုဖန်တီးရန်အားသာချက်များရှိသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြက္ခဒိန်သည်သင်၏အလုပ်များ၊ အစည်းအဝေးများနှင့်အဖြစ်အပျက်များကိုခြေရာခံရန်အလွန်အဆင်ပြေသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားတစ်နေ့တာသတ်သတ်မှတ်မှတ်အချိန်တစ်ခု၌သင်လုပ်နိုင်သည်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်အပိုင်းများအဖြစ်ခွဲထုတ်ရန်ကူညီပေးသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားသင်ဘာလုပ်ရမည်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်ကိုကူညီနိုင်သည်။ ဤသည်မှာလူအများစုအတွက်အဓိကကျသောအချိန်ဖြစ်သည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြက္ခဒိန်သည်သင်၏အစီအစဉ်များကိုစီစဉ်ရန်နှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတိုးတက်မှုကိုခြေရာခံရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားကြီးမားသောအရာများကိုအာရုံစိုက်စေသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရပြက္ခဒိန်ကပိုကြီးလေအသေးစိတ်လေလေဖြစ်တယ်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်တွင်အီးမေးလ်စာရင်းကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အာရုံစိုက်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရှိပါကစာတိုက်တစ်ခုစီအတွက်ရက်စွဲများကိုသေချာအောင်လုပ်သင့်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များဖြင့်သင်ပစ်မှတ်ထားနေရန်နှင့်ပစ်မှတ်မထားသည့်စာစောင်များမှငွေနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုဖြုန်းတီးရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
ပြက္ခဒိန်တစ်ခုထားရှိခြင်းကသင့်အားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စေသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သင်၏အချိန်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုချဲ့ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ယခုသင်သည်သင်၏အချိန်ကာလတစ်ခုချင်းတွင်သင်၏တာ ၀ န်များနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုခြေရာခံနိုင်ပြီဖြစ်သောကြောင့်သင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိသောအခြားလုပ်ဆောင်မှုများကိုသင်ပြင်ဆင်နိုင်လိမ့်မည်။ ပြက္ခဒိန်ကဲ့သို့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုသည်သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုစီစဉ်ရန်၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ၏တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံရန်နှင့်သင်၏စျေးကွက်မဟာဗျူဟာ၏ထိရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်လည်းကူညီလိမ့်မည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးကသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေတိုးချင်ကြတယ်။ သို့သော်ပစ်မှတ်ထားသည့်စျေးကွက်ကိုအောင်မြင်စွာရောက်ရှိရန်အချိန်၊ ငွေနှင့်အားစိုက်မှုများစွာလိုအပ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်အဖွဲ့အစည်းများစွာသည်လစဉ်အခင်းအကျင်းများဖန်တီးခြင်းသို့မဟုတ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးသော့ချက်စာလုံးတစ်လုံးနှစ်လုံးကိုအာရုံစိုက်ရန်၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများ၏အာရုံကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ပိုမိုတက်ကြွသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းကိုစတင်ကျင့်သုံးလာကြသည်။
မင်းရဲ့ပြက္ခဒိန်ကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာမြှင့်တင်ရေးအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာသတိထားမိမှာပါ။ သင်၏အချိန်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုစီစဉ်ထားခြင်းမရှိပါကသင်၏စီးပွားရေးကိုကြီးထွားရန်အခွင့်အလမ်းအမျိုးမျိုးကိုလျစ်လျူရှုရန်လွယ်ကူသည်။ ဒါပေမယ့်စနစ်တကျစီစဉ်ထားတဲ့အချိန်ဇယားနဲ့အတူမင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းတွေကိုမင်းရယူနိုင်မှာပါ။
V. Track ပြီးတော့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်
ထို့အပြင်ပြက္ခဒိန်သည်ရက်သတ္တပတ်၏နေ့တိုင်းအတွက်အချိန်ဇယားဆွဲရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ဤပြက္ခဒိန်သည်အစီအစဉ်တစ်ခုစီ၏တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံနိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီ၏အစီရင်ခံစာကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအချိန်နှင့်တပြေးညီသင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုဆန်းစစ်နိုင်သည်။
5. သင်၏ 2021 စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြက္ခဒိန်တွင်စတင်ခြင်း
က။ လုပ်။ သို့မဟုတ်မ?
သင်၏စီးပွားရေးအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြက္ခဒိန်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးဆုံးမှာသင်အသုံးပြုမည့်ပြက္ခဒိန်အမျိုးအစားကိုစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။ သင့်တွင်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိပါကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြက္ခဒိန်ရရန်သို့မဟုတ်စိတ်တိုင်းကျပြက္ခဒိန်တောင်းခံရန်စဉ်းစားရန်လိုကောင်းလိုပေမည်။ ၎င်းတို့တွင်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောစာမျက်နှာများကို preprinted ပြုလုပ်ထားသည်။
သူတို့နှင့်တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာမှာ၎င်းတို့တွင်များသောအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များစွာထည့်ရန်နေရာများများမရှိသော်လည်း၎င်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။ သင့်မှာလုပ်ငန်းသေးသေးလေးရှိရင်သင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်နိုင်တယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောပြက္ခဒိန်ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည့်ဆော့ဖ်ဝဲပရိုဂရမ်များစွာရှိသည်၊ ၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်များကိုအတော်အတန်လျှော့ချနိုင်သည်။
သင်သတိထားရမည့်အခြားအရေးကြီးသောအချက်အလက်တစ်ခုမှာသင်၏ပြက္ခဒိန်အတွက်အစဉ်အမြဲပုံစံနှင့်ပုံစံရှိရန်လိုအပ်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းမှအမြင့်ဆုံးထိရောက်မှုကိုသင်မရနိုင်ပါ။ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြက္ခဒိန်သည်ဖတ်ရန်လွယ်ကူပြီးလိုက်နာရန်လွယ်ကူသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းအင်္ဂါရပ်နှစ်ခုလုံးကိုပေးထားသောပုံစံတစ်ခုကိုရှာရန်ကြိုးစားပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်များများကြည့်လေလေ၊ စျေးကြီးလေလေဖြစ်တယ်။
သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြက္ခဒိန်ကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည်အရေးကြီးကြောင်းကိုအလွန်အမင်းလျှော့တွက်။ မရပါ။ သင်၏တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံရန်လိုအပ်သည်သာမက၎င်းကိုရှုပ်ထွေးမှုမဖြစ်စေရန်လည်းအရေးကြီးသည်။
နောက်ရက်သတ္တပတ်တွင်သင်စီစဉ်ထားသည့်ရက်များနှင့်ထိုရက်သတ္တပတ်အတွက်သင်စီစဉ်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုသင်မြင်တွေ့လိုသည်။ သင်၏ပြက္ခဒိန်တွင်တစ်ရက်စီ၏အတိုချုပ်ဖော်ပြချက်အပြင်ထိုနေ့တွင်သင်လုပ်ဆောင်မည့်အရာတိုတိုကိုလည်းထည့်သွင်းရန်အထောက်အကူပြုသည်။ သင်လိုချင်သောရလဒ်ကိုရရှိရန်သင်၏ပြက္ခဒိန်နှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကိုစနစ်တကျစီစဉ်ထားရမည်။
သင်၏ပြက္ခဒိန်အတွက်သင့်တော်သောဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိရုံသာမကအမျိုးမျိုးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံး ၀ င်သောဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပြက္ခဒိန်သည်အချိန်ဇယားနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအားလုံးကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုံလောက်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သင့်သည်။ ပြက္ခဒိန်ပေါ်ရှိမတူညီသောဖောင့်များ၊ စတိုင်များနှင့်အရောင်များကိုအသုံးပြုရန်လည်းအကြံပြုလိုပါသည်။
သို့သော်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ပြက္ခဒိန်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲနေစဉ်အချို့အရာများကိုဂရုစိုက်ရန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးသဘောသဘာဝ၊ ကုမ္ပဏီ၏အမည်၊ ဖန်ဆင်းခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်နံပါတ်များကိုတစ်နေရာတည်းတွင်သိမ်းထားရန်အကြံပေးသည်။ ဤအချက်သည်သင်၏သုံးစွဲသူများအတွက်ပြက္ခဒိန်ကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြက္ခဒိန်များသည်နံနက်တိုင်းသင်၏မျက်စိကိုဖွင့်သောအခါမျှော်လင့်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုခုပေးခြင်းဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုပိုမိုထိရောက်စွာလည်ပတ်စေနိုင်သည်။ သင့်ရုံး၌၊ သင့်လက်ပ်တော့ပ်သို့မဟုတ်ဖုန်းပေါ်တွင်ထိရောက်သောပြက္ခဒိန်တစ်ခုရှိပါကအလုပ်ကိုအချိန်မီပြီးမြောက်ရန်သင်ပိုမိုလှုံ့ဆော်ခံရကြောင်းသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ဤသည်ကကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးစေလိမ့်မည်၊ မင်းရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြက္ခဒိန်ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးမယ့်အစား၊ Semalt ဒီနှင့်အတူသင်ထွက်ကူညီနိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့သင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်ဟာဆွဲဆောင်မှုရှိရုံသာမကအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးထိရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။